थोरै वाहवाही मै विश्वविजेता !
असार २४, २०७६ मनु बिद्राेही
कविताबाट नेपाली साहित्यमा प्रवेश गरेका साहित्यकार अनिश सापकोटा एक दशकदेखि नेपाली साहित्यमा निरन्तर कलम चलाईरहेका छन् । उनलाई ब्रह्मलीन १०००८ डा.स्वामी रामानन्द गिरिज्यूकाे सत्प्रेरणाबाट साहित्यमा लाग्न प्रेरणा मिलेकाे हाे ।
सानैदेखि साहित्यमा रुचि भएकाले विद्यालयमा हुने गरेका विभिनन्न प्रतियाेगितामा उनी पुरस्कारकाे भागेदार भइराख्थे ।उनकाे कविता अलवा लघुकथा, गजल, मुक्तक, हाइकु जस्ता विभिन्न बिधामा पनि कलम सशक्त रुपले अघि बढेकाे छ ।
यिनी हाल सुस्केरा साहित्य प्रतिष्ठानमा सचिब र महेश साहित्य सङ्गममा सदस्यका रुपमा कार्यरत छन् । यिनका वभिन्न समयमा शाल्मली, उद्यान र विभिन्न अनलाइन पत्रिकाहरुमा विभिन्न साहित्यिक लेखहरु छापिँदै अाएका छन् ।सापकोटास‌ंग सारङ्गी न्युजकर्मी मनु विद्राेहीले गरेकाे कुराकानी :
_ म अचेल आफ्नो परीक्षा निकटमा भएकाले परीक्षाको तयारी गर्दै छु ।
_ साहित्य समाजको दर्पण हो तर साहित्यमा सत्यं शिव सुन्दरम्को भाव अभिव्यक्त हुनुपर्छ । यो स्वान्तसुखाय र परोपकाराय दुवै हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छु । समाजको र देशको अनि प्रकृति तथा मानवताको सम्बोधनको निम्ति साहित्य लेख्छु ।
अहिलेको नेपाली साहित्यको स्थितिको बारेमा कत्तिको सकारात्मक हुनुहुन्छ ?
_ विगतदेखि आजसम्मको लगभग १५-१६ बर्षभित्र धेरै राजनीतिक उथलपुथल भयो । साहित्यमा पनि त्यसको प्रभाव परिहाल्यो नै। जसरी देशमा आन्दोलनका नाराहरू , अधिकारका अनेकौं परिभाषाहरू व्याप्त भए साहित्यमा पनि पूरा नारामात्रै , असन्तुष्टिमात्रै , कुनै पार्टीको दस्तावेजजस्तो मात्रै देखियो ।
केही जान्दैमा, थोरै लेख्दैमा थोरै वाहवाहमा नै आफूलाई विश्वविजेता ठान्ने पनि ।छन् केही एकाध योबाट मुक्त पनि नभएका होइनन् ।कतै आफ्नो साधना रयुक्त,नैतिकतायुक्त , छलछालरहित जमात पनि छन् ।परन्तु बुझेर बुझिनसक्ने मोर्चाबन्दी ,गुटउपगुट , गालीगलौच र केही अश्लील असामाजिक साहित्य पनि देखिए । एउटा साहित्य मनपराउने सामान्य विद्यार्थी भएकाले ममा पूरा विश्लेषण गर्ने क्षमता ५०% पनि छैन । तर मेरो वैयक्तिक कुरा गर्ने हो भने म त्यति सन्तुष्ट छैन ।
_ अचेल त साहित्यमा संलग्नता महिलाको पनि उल्लेखमात्रामा देखिन्छ । यहाँ अगाडि पछाडि भन्दा पनि सबै साधना गरेर , अध्ययन गरेर , भाषागत र अन्य साहित्यिक कुशलता हासिल गरेर मात्रै अगाडि बढ्नु राम्रो हो । सङ्ख्यात्मकता भन्दा गुणात्मकतालाई बढी ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ ।
_ बढ्ता मिडियाबाजी , विविध नातावाद र कृपावादको प्रभाव पनि देखिन्छ तर त्यो धेरै टिक्दैन । मैले भनेँपनि केही जान्दैमा, थोरै लेख्दैमा थोरै वाहवाहमा नै आफूलाई विश्वविजेता ठान्ने पनि छन् ।
अधिक कुशलता छ भने त्यसलाई मिडियामा पनि ल्याउन पर्छ । तर साधना कहिल्यै रोकिन हुन्न । यदि क्षमता पनि छैन , लेखेको केही मिलेछैन भने त्यतिबेला जति मिडियाबाजी नातावाद र कृपावाद भयो भने पनि त्यो श्रष्टाको बदनाम हुन्छ र त्यो धेरै टिक्दैन ।साहित्यमा त प्रभाव थोरै परेकोजस्तो त हुन्छ ।
- साहित्यमा नैतिकता , राष्ट्रप्रेम , राष्ट्रिय एकता , विभेदरहित समाज, आफ्नो राष्ट्रिय गौरवको बारेमा उल्लेख भए समाज परिवर्तनको निम्ति धेरै थोरै केही न केही सहयोग मिल्छ ।
_ठूलाठूला साहित्यिक पुरस्कारहरूको स्थापना गर्ने , साधक तथा अनुभवी सर्जकहरूलाई उत्कृष्ट हिसाबले सम्मान गर्ने ,उत्कृष्ट कृतिहरू विश्वव्यापी बनाउन अनुदान , अनुवाद र विश्वव्यापारको व्यवस्था मिलाउने , प्रत्येक मिडियाहरूमा साहित्यिक दैनिक कार्यक्रम राख्न नियम बनाउने , विविध फिल्महरू र गीत बनाउँदा साहित्यकारहरूको उत्कृष्ट रचनाहरूमात्रै प्रयोग गर्ने
-जबर्जस्ती अधिकांश अङ्ग्रेज शब्द र अन्य केही हिन्दी ,उर्दु फारसी शब्द प्रयोग गर्ने देखिन्छ । थोरै र केही उचित स्थानमा प्रयोग त ठिकै हो तर भद्दा प्रयोगले कृतिनै वर्णसङ्कर बन्छ । यो त्यति ठिक पनि होइन ।
_ म एक साहित्यको विद्यार्थी हुँ । मैले अध्ययन गर्न बाँकी धेरै छ ।त्यसैले म धेरै कृतिहरू र सिद्धान्तहरू पढ्नेबाला छु । केही पढ्दै पनि छु । नेपाली साहित्यले विश्वभरि स्थान पाएको हेर्ने ठूलो रहर छ ।लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा , बालकृष्ण सम , लेखनाथ पौडेल ,शंकर लामिछानेजस्ताको कृति अङ्ग्रेजीमा अनुवाद भएर विश्वभर फैलिए हुन्थ्यो । यो कुनै दिन जरुर हुनेछ ।साहित्य व्यापार हैन न त यो राजनीति गर्ने स्थल । यो पवित्र मन्दिर हो । यसको पुजारी बनूँ ।मलाई आफ्नो भावना राख्न दिनुभयो । यो अवसर जुटाइदिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद ।